Wiil Soomaali ah oo maanta lagu toogtay magaalada Columbus -
Wiil Soomaali ah oo maanta lagu toogtay magaalada Columbus
Waxaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio maanta lagu toogtay wiil dhallinyaro ah. Ciidanka Booliiska magaalada Columbus ayaa sheegay in galabta niskii dambe la soo wacay, laguna soo wargeliyay in xaafada Blacklick, gaar ahaan ciwaanka 700 block of Churchside Chase Drive ee magaalada Columbus la isku xabadeeyay.
Sarkaal kamid ah booliskii u soo gurmaday goobta ay is xabadeyntu ka dhacday ayaa warbaahinta u sheegay in ay u yimaadeen qof wiill dhallinyaro ah oo u dhintay dhaawac culus oo ay xabadi sababtay.
Haddaba wiilkan Soomaaliag ah ee toogashada u dhintay ayaa wali magaciisa la sheegin, balse waxaa la yaqaanaa qoyskii dhalay wiilka. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa labadii bilood ee u dambaysay waxaa lagu dilay dhallinyaro aad u tiro badan oo Soomaali ah.
Booliska magaalada Colubus ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan la xiriira dhimashadda wiilkan aadka u da’da yar. Kor ka daawo video laga soo duubay dilka loo geystay wiilkan dhallinyarada ah.
Bahda Wargeyska Tusmo Times ayaa idiin soo gudbin doontaa wixii akhbaar dheerad ah ee ku soo kordha dilka wiilkan dhallinyarada ah.
Xigashadda Sawirka: WBNS 10-TV
Related Items:Featured, Somali community, Somali immigrants, Youth